देवघाट क्षेत्र विकास समितिको बोर्ड बैठक सम्पन्नः के–के भए निर्णय ? - Narayanionline.com
देवघाट क्षेत्र विकास समितिको बोर्ड बैठक सम्पन्नः के–के भए निर्णय ?
देवघाट क्षेत्र विकास समितिको ५८ औं बोर्ड बैठक सम्पन्न भएको छ । समितिको सभाहलमा शुक्रबार सम्पन्न बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि करिब ११ करोड १५ लाखको बजेट मन्त्रालयलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव धिरणबाबु घिमिरेका अनुसार बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रमहरु अनुमोदन गरेको छ । साथै हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदनको समिक्षा गर्दै बैठकले कारोनाले पारेको प्रभावका बारेमा छलफल गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार छलफलले समितिको स्वामित्वमा रहेको पार्किङ् क्षेत्रको भाडा ५ महिनाको छुट गर्ने र पार्क, व्यावसाय सञ्चालन गरेकाहरुलाई तीन महिना छुट दिने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले कार्यालय सहयोगीहरुको स्तर वृद्धि गर्नका लागि सदस्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष बद्रिप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, पुरातात्विक अधिकृत करुणा नकर्मी, चितवन, तनहुँ र नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित तीनै जील्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
चितवनमा थप २२१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
मकवानपुरको भीमफेदीमा सवारी दुर्घटना, एकको मृत्यु
रंगशाला सहयोगार्थ महायज्ञः शोभा यात्रामा हजारौंको सहभागिता (तस्विरमा)